Frei (D) räume - Ukubona iNdawo yaMahala: Inkomfa + Emva kwepati · Oyoun | Ukucinga ngokutsha kwenkcubeko
Frei (D) räume-Ukubona iNdawo yaSimahla: Inkomfa + Ipati
NgoNovemba 27, 2021 11:00 AM - NgoNovemba 28, 2021 05:00 AM
« HAVEN- Konke onako ukuBling kwiHolide ekhethekileyo nguMboniso weRadio yaseBerlin
Inkqubo yomdaniso we-Mince eV »
◥ Yiza uhlanganyele nathi eBerlin nge-27 kaNovemba ngosuku olupheleleyo lweendibano zocweyo, iintetho kunye nemidlalo!
Ngaba ngokwenene sibonakalisa kwaye siqhelanisa? Ngaba iindawo zethu kunye noluntu lwethu luyakwazi ukumelana neentlekele ezilandelayo?
Ukupheliswa kweendawo zethu ezikhululekileyo ezizilungelelanisiweyo ziyakhawuleza. Sihlala singaxhaswanga kwaye ubukhulu becala singathathelwa ngqalelo ngoorhulumente basekhaya, nanjengoko kucacile ukuba inkcubeko yokuzimela ngokwayo iya kudlala indima ebalulekileyo ekujonganeni neentlekele zehlabathi ezizayo.
Yeyiphi indima edlalwa ngumdaniso, uqhanqalazo kunye nokubanga kwakhona inkululeko yokunyakaza ukuyila ikamva esilidingayo? Lixesha ngoku lokuba sijonge kwimizekelo yembali kunye neyangoku ukuze sibeke izinto ngendlela efanelekileyo kwaye sakhe unxibelelwano phakathi kwamatsha ntliziyo, amagcisa, iiarhente zopolitiko, abatshintshi bedolophu kunye nokutyhala umanyano ukuze sikhuthaze ukomelela kwethu.
Siyakumema ukuba usimanye kunye nathi kulwazi kunye nobuchule bokubuyisela ikamva lethu, kwiingxoxo ezicela umngeni kunye nemibhiyozo yokuzibonakalisa ngokugqibeleleyo. Lixesha ngoku lokuba sakhe iibhulorho phakathi kwamatshantliziyo, amagcisa, iiarhente zopolitiko, abatshintshi basezidolophini kwaye sityhale umanyano ukuze sikhuthaze ukomelela kwethu.
→ Ulwimi: IsiNgesi kunye nesiJamani
→ Vula iingcango: 11:00
Ukuqala komsitho: 12:00
→Fumana itikiti lakho apha.
→ Ulwazi oluninzi ngezithethi, amagcisa kunye ne inkqubo inokufumaneka Apha.
self-umbutho ukwenzela utshintsho lwemozulu nje
izixhobo ze-diy zokulungisa indawo yasezidolophini
ezopolitiko, umbutho kunye nomanyano
blockchain & nfts's ukwenzela ixesha elide equity?
olunye uqoqosho: iidisc kunye nexesha
intshukumo yolonwabo kunye nokukhathalelana
queer & feminist rave-olution ukusuka empuma ukuya entshona
queer raver care iteknoloji elizayo
indawo pirates ukusuka kwixesha elizayo
◥ Namalungu e
17 umbonandi - act4culture Georgia - abadlali botshintsho lwedolophu - anti-mass euganda - bam c - bassiani inkqubo yesandi yebqestia - cameltown - ikhomishini yeklabhu - inguqu eqhelekileyo - cxema Umshicileli - disco.coop - umbanes - ukubaleka 010101 - indawo ekhululekileyo yohambo - phambili uguquko - inguqulelo yabanqolobi - amaziko afihliweyo - ubusuku bokuhlala - ikholaji edibeneyo - ithuku lokudlala ngokudibeneyo ev - cosmicare - las tesis collective - nqinda - uthando isiseko - mina ngqokelela lisboa - ubusuku usodolophu isiseko - nyege nyege festival - iikopolotyeni zeqonga ejamani - vuyisa ukwazi - indawo yongxamiseko -abaphangi bendawo kwikamva - isizwe esijikelezayo - ivenkile enkulu eberlin - imagazini eqinile - trans europe halls - ts iraver - simanyene singumsinga - ukuvusa umnyhadala wobomi - xenoentities - ecolise - zad notre dame welizwe - хіть kyiv
◥ Abagcini abaphambili:
Ukusukela ngo-2016, uLiese Kingma ubengoyena mlondolozi kunye nomphuhlisi wengcinga weFREI [T] RÄUME inkomfa. Ngomsebenzi wakhe, ukwazile ukumanyanisa amagcisa, amatshantliziyo, izithuba, abatshintshi basezidolophini kunye nabatshintshi bezopolitiko kwintshukumo yestroboscopic. Ecaleni komsebenzi wogcino-mali, ungumphuhlisi weprojekthi yeSithuba sePlatform yokuKhawuleza. Ngomsebenzi wakhe e-Amsterdam, eBerlin, eVienna naseHelsinki, uye wadala intsebenziswano kunye nentsebenziswano phakathi kwabadlali bezentlalo nenkcubeko abazilungelelanisiweyo kunye noorhulumente basekhaya ekuphumezeni ufikelelo olulula kwindawo yenkcubeko ezilungelelanisiweyo. Kunye neqela le-Space of Urgency, uLiese okwangoku ucebisa uphuhliso loMgaqo-nkqubo weSithuba saMahala e-Amsterdam kunye nokwakha indawo ye-intanethi yeqonga longxamiseko, Kwi-FREI [T] RÄUME 2021, uLiese yeyona projekthi iphambili kunye nomgcini.
ngumculi waseSerbia / waseDatshi, umphandi kunye nomgcini. Wenza uphando lobuGcisa PhD kwiYunivesithi ye-Applied Arts eVienna kunye neprojekthi yophando eqhubekayo "Ndidansa ndedwa" ebona i-clubbing evela kwiintaka-iliso-imbono njengesipili sotshintsho lwentlalo nezopolitiko. Ukuphanda iintshukumo ezidityanelweyo nezomntu ngamnye zomgangatho womdaniso. Waseka inkcazo ye "Dance of Urgency", umdaniso ophakama ngamaxesha eengxaki zomntu kunye neqela. Umdaniso onjalo ujolise ekuxhobiseni abantu kunye neqela. UBogomir ungumlondolozi kunye nentloko yemfundo kunye nophando kwiMyuziyam yaseNxt eAmsterdam. Uthetha kwaye ufundisa kumazwe ngamazwe. Ungumququzeleli weFrei (T) räume - usuku lukawonke-wonke lwenkomfa ye-Stadt Nach Acht ukususela ngo-2014. Ubenegalelo kwiminyhadala eyahlukeneyo yomculo wamazwe ngamazwe, iinkqubo zeklabhu kunye namaziko.
◥ Amaqabane & Co-Sponsors
Iprojekthi ngo Indawo yongxamiseko
Abaxhasi / amaqabane:
Abadlali boTshintsho lweDolophu, inkqubo nge MitOst eV. ixhaswa nguRobert Bosch Foundation
Abalingani: Isixeko emva kwesibhozo, Umanyano Siyasasaza, Iqela le-Spieltrieb eV
◥ Nceda uqaphele: Ukuthatha inxaxheba kwimisitho e-Oyoun okanye undwendwele imiboniso yethu, kufuneka ube nobungqina bokugonywa / ukubuyisela (umgaqo we-G2). Iimaski ze-FFP2 zinyanzelekile e-Oyoun de kube esinye isaziso. Ulwazi olongezelelweyo malunga nombono wethu wococeko lunokufumaneka Apha.
◥ E-Oyoun, akukho ndawo yocalucalulo ngokwesini, intiyo, i-queerphobia, i-transphobia, naluphi na uhlobo lobuhlanga okanye ucalucalulo olufana nokuchasa uMnyama, ukuchasa amaSilamsi okanye ubuhlanga obuchasayo ubuJuda, kunye nalo naluphi na uhlobo lokuziphatha ngobundlobongela okanye ndlongondlongo. I-Oyoun inikezela ngendawo ekhuselekileyo kubo bonke, iforamu evulekileyo yengxoxo kunye nendawo apho sixhasana kwaye simelane. Ukuba kukho umntu / kukho into ekukhathazayo ngexesha lomsitho, nceda uqhagamshelane nelungu labasebenzi bethu abakhoyo ukuze bancede! Ukuba ufuna ukwabelana nathi ngamava emva kwesiganeko, nceda usibhalele i email okanye usithumelele umyalezo ongachazwanga ngegama lethu website
NgoNovemba 27, 2021 11:00 AM
NgoNovemba 28, 2021 05:00 AM
Izandi / Izandi, iNethiwekhi, panel, ukwenza, thetha, Iitekisi / iitekisi, Workshop
Ngomhla woku-22 ku-19pm - 21: 00
Ngomhla woku-24 ku-17pm - 20: 30
UMNYANGO WEZOBUGCISA OKWENZAYO | Iziko lomnyhadala eOyoun
Ngomhla woku-25 ku-11pm - Ngomhla woku-26 ku-00pm